Makore makumi maviri nemasere ezviitiko anotarisa kumatombo edhaimani ekukuya pasi uye kupora.
Shandira pamwe nemayunivhesiti epamusoro mune zvese United States & China. 69 patent neEUIPO; Chitupa che ISO9001, nhengo yeISSA ...
Kubatana kwenguva refu
Gara uchitsvaga uye kukurudzira kwenguva refu kubatana nevatengi uye tariro yekukura nemumwe wako pamwe chete.
Yakazara QC system uye timu
Pane-saiti QC, Kugadzira Ekutevera Management, "6S" manejimendi, kazhinji kudzidziswa kwakajairwa kuona mhando
Mutambo-unoshandura EZshine Tough-Flex Polycrystal Technology
EZshine pasi mapedhi anogona kuunza Kaviri Hupenyu, 50% Yevashandi Kuchengetedza, Yakakwira Kujeka uye Gloss kupfuura vamwe vakwikwidzi. Kunonyanyisa Performance, Kunonyanyisa Kubudirira, Maximum Profit & Minimum Kudya.
Yakazara pasi pads system. Mhinduro dzakasiyana dzinowanikwa kune ese mabasa pane ese pasi.
Basa redu, chivimbiso chedu, kupa zvakaenzana zvigadzirwa zvakanaka kune vedu vatengi
Kubata nguva uye nekukurumidza kutumira nguva
Iyo yakatarwa yekugadzira tambo uye timu ichave nechokwadi kuti iwe unogona kugamuchira izvo zvaunoda nenguva
Mawebhusaiti, Kuchenesa Magazini, maFairs, isu tichaisa mari yakawanda kuti ikubatsire iwe kuwedzera musika. Zvishandiso zvekushambadzira zvinosanganisira maKatalogu, Akagadzirirwa Kudzidzisa Maturusi, Yekudzidzisa Chinyorwa chevashandisi vekupedzisira, Mavhidhiyo ... ichave yakavhurika kwauri. Chero bedzi zvichikubatsira iwe kuwedzera musika, isu tinokutsigira iwe munzira dzese
Vatengesi chete, hapana vashandisi vekupedzisira
Usambofa watengesa zvigadzirwa kune vanogumisa-vashandisi. Gara uchidzivirira musika wako sevatengesi vakatendeka. Chibvumirano chakasarudzika mune mimwe misika chakavhurwa nhaurirano
Concrete makorari Mapedhi, Simbi Yakasungwa Daimondi Kukuya Mavhiri, Trapezoids Daimondi Kukuya Shangu, Diamond Kwayedza Bhutsu, PCD Kukuya Shangu, Concrete vachikuya Shoes,